Baalee Gobbaa: Walitti bu'iinsi guyyoota muraasa darbanii namoota jaha galaafate - BBC News Afaan Oromoo
Baalee Gobbaa: Walitti bu'iinsi guyyoota muraasa darbanii namoota jaha galaafate
Goodayyaa suuraa Hokkora Magaalaa Gobbaa keessatti mudateen namoonni jaha ajjeefaman
Walitti bu'iinsa godina Baalee magaalaa Gobbaa keessatti guyyoota muraasa darban mudateen lubbuun namoota jaha darbuu kantiibaan magaalattii Aadde Zeynabaa Xahaa BBC'tti himaniiru.
''Hanga guyyaa kaleessaatti nama 6'tu awwaalame, namoonni dhahamani hospitaala seenan baay'ee jiru,'' jedhu.
Walitti bu'iinsi kun addabaabayii magaalattii jidduu jiru irratti siidaa Haji Adam Saaddoo dhabuuf sochii taasifame mormuun eegale jedhu.
Siidaa jeedala diimtuu magaalaattii keessa ture siidaa Haji Adam Saaddootiin bakka buusuuf yaada jaarsolii biyyaa fi abbooti amantaa irraa dhufe mootummaan fudhachuu isaa himu Aadde Zeynabaan.
''Koloneel Aliyyii Cirriin nama uumamaan gabrummaaf hin jilbeeffanne''
Haa ta'u malee, komiin "Jeedalli kuni hin kaatu, siidaan Haji Adam Saaddoo bakka biraatti haa dhaabatu,'' jedhu ka'uu dubbatu Aadde Zeynabaan.
Komiin jiraattota ijaarsa siidaa kana mormanii hanga godinaa gahus himu.
Haawaasni gar biraa immoo, ''siidaa goota keenyaa bakka mul'atutti malee bakka biraa hin dhaabnu, sababni Jeedalli hin kaaneefi maali?'' jedhani gaafataa turan jedhu.
Qondaalli magaalatti akka himanitti yaadi siidaa kana ijaaruu tureera. Mariin yeroo adda addaas taasifameera.
Marii Kibxata darbe hoggantoonni Godina Baalee hawaasa waliin taasisanin, galmi walgahii namoota siidaa kana mormaniin guutamu himu.
''Dubbiin dubbii amantii miti jedhani, ammoo duuchumaan siidaan hin dhaabatu, Jeedalli hin kaatu,'' jedhani morman jedhu.
Gaafa Roobiillee mariin dargaggoota waliin taasifamu dubbatu.
"Bulee gaafa Kamisaa namuu gara gara ofiitiin dhaadatu eegale, namoonni gara amantiitti geessu yaadanillee turan," jedhu kantiibaan magaalatti.
Gaafa Jimaataa immoo jiraattonni bakka dhaloota Haji Adam Saaddoo ulee qabatanii gara magaalaa Gobbaa seenuu dubbatu.
''Dubbii nagaaf deemtu taanaan ulee harkaa qabdan lafa kaa'aa jedhamanii," ulee lafa ka'anii magaalaa seenuus himaniiru.
Kanneen to'atamanillee jiraachuu dubbatu.
Durumaa addabaabayi sana irratti Jeedala jedhame wanti dhaabate saree fakkaata, "Nama dhaabeef Jeedala fakkaachu danda'a. Namni hundinuu akka kana hin ta'in hin beeka," jedhu jiraataan magaalattii tokko.
"Gaaffii ummanni kaase domsuuf wanti ta'e ni jira, kana immoo kan godhe shira xaxxoota malee kan biraa miti," jedhu jiraataan kun.
Namoonni akkamiin ajjeefaman?
Gaafa Sambataa jiraattoonni baadiyyaa irraa dhufan beekkamti mootummaa malee ofumaa yaa'anii siidaa Jeedala Diimtuu jijjigsuu isaanii Aadde Zeynabaan himu.
Yeroo kuni raawwatu waldhabdeen homaa akka hin dhalanneefi namni akka hin duune dubbatu.
Haa ta'u malee, jirattoonni baadiyyaa irraa dhufan kunneen yeroo magaalarraa bahaa jiranitti mana amantaa Ortodoksii irraa sagaleen qaacilaa yeroo balaa dhagahamuufi walitti bu'iinsi eegalu himu.
Bishaan horiin dhiitan dhugaa turre, sanuu dhabne - buqqaatota Baalee jiran
Walitti bu'iinsi kunis irra caalaan jiraattota magaalattiifi kanneen baadiyyaa irraa dhufan jidduutti ta'uu himaniiru.
Walitti bu'iinsi kun bu'ura sabummaas ta'e amantii hin qabu jedhu jiraattonni magaalatti BBC'n dubbise.
''Qaamni hin beekamne hidhannaa guutuu qopheeffate, hanga polisiin Oromiyaa meeshaa guutuu fixatutti sa'aatii shanii eegale hanga sa'aatii 12 dhukaasaa ture," jedhu.
''Baay'inaan kan ajjeefaman qawween yoo ta'u, namoonni du'an garri caalu kanneen baadiyyaa irraa dhufanidha.''
Dhimmi hammana ni hammaataa jedhani akka hin yaaadne fi kanas akka hin eegne Aadde Zeynabaan dubbatu.
Erga rakkoon kuni dhalate boodas humni kora bittinneessaa Oromiyaa tasgabbeessaa akka jiruufi guyyaa boris jiraattota waliin mariin taasifamuf karoorfameera jedhan.
Goodayyaa suuraa Dhalatoonni Gobbaa Finfinnee jiraatan mootummaa waliin mari'atan
Dhalattoota Gobbaa Finfinnee
Dhalattoonni magaalaa Gobbaa magaalaa Finfinnee keessa jiraatan har'a dhimmicha irratti aanga'oota mootummaa Oromiyaa waliin mari'ataniiru.
Qindeessitooti koree dhalattoota magaalaa Gobbaa bakka bu'anii BBC'tti akka himanitti kaayyoon marii kanaa mootummaan waan ta'aa jiru beekaa jedhanii gaafachuu ture.
Mootummaa irraas "eeyyee ni beekna, walitti bu'iinsi kun namoota fedha siyaasaa adda qabaniin maallaqaan kan deeggarame ta'uu mootummaan ni beeka, eenyu dudduuba akka jirus qorataa jirra," deebii jedhu argachuu isaanii himaniiru.
Walitti bu'iinsichi sabas amantaas kan bu'uurreffate akka hin taane, rakkoo uumame tasgabbeessuf humni ittisa biyyaa gahaan magaalattiitti ramadamuus nutti himaniiru jedhan.
Haji Adam Saaddoo eenyu?
Haji Adam Saaddoo qabsoo uummanni Baalee sirna mootii Hayilasillaasee irratti taasisaa ture keessatti nama qooda adda durummaa qaban turan.
Boodarras miseensa boordii Waldaa Maccaafi Tuulamaa ta'uun hojjetaa turani jedhu pireezidantii Waldaa Maccaafi Tuulamaa kan turan Dr. Gammachuu Magarsaa.
"Waldaa Maccaafi Tuulamaa fi Oromoota Baaleefi Arsii gidduutti riqicha turan," jedhu.
"Waraqaa Jeneraal Taaddasaa Birruutti kennuuf Baalee irraa fidee dhufe waliin Finfinneetti qabamee hidhame, achi booda garaan na dhukkuba ala na baasaa jedhee yoo isaan baasan, waraqaa fide sana nyaatee liqimsee, "Waan garaa nu baate garaatti nu deebite" jedhe mammaake," jedhu.
Obboo Aadam Tiinnaa Jaarraa: ''Koloneel Aliyyii Cirriin nama uumamaan gabrummaaf hin jilbeeffanne''